Ruushka wuxuu abuuri doonaa xarun federaali ah oo karti u leh beeraha dabiiciga ah - PotatoSystem
Ruushka wuxuu abuuri doonaa xarun federaali ah oo karti u leh beeraha dabiiciga ah
Wasaaradda Beeraha ee Xiriirka Ruushka waxay u qoondeysay 32 milyan oo rubles abuurista ku saleysan Akadeemiyada Beeraha ee Yaroslavl ee Xarunta Dhexe ee Federalka ee Awooda Beeraha Organic.
Waaxda waaxda agro-warshadaha iyo suuqa macaamiisha ee gobolka Yaroslavl ayaa sheegay in lacagtaasi ay aadeyso aaladda sheybaarka si loogu sameeyo cilmi-baaris tayo leh, iyo sidoo kale qalabeynta tababbarka, wax soo saarka iyo goobaha banaanbaxyada.
“Beeraha dabiiciga ah waa mid ka mid ah meelaha mudnaanta koowaad la siinayo horumarinta beero-wershadaha gobolka,” ayuu yiri Valery Kholodov, Raiisal wasaare ku xigeenka gobolka. - Maanta, gobolka Yaroslavl waa hogaamiyaha iyo soosaaraha ugu weyn ee wax soo saarka beeraha dabiiciga ah. Qaybta gobolka ee wadarta wax soo saarka Ruushka ee wax soo saarka hilibka dabiiciga ah iyo hilibka, caanaha iyo waxyaabaha caanaha ka badan 30 boqolkiiba. Furitaanka xarunta ayaa u oggolaan doonta kor u qaadis tayo leh faafinta beeraha dabiiciga ah labadaba gobolkeenna iyo Xiriirka Ruushka guud ahaan.
Gobolka Yaroslavl, boqolkiiba 12 dhulalka Ruushka ee sharciyeysan wax soo saarka alaabada dabiiciga ah ayaa ku yaal. Intaa waxaa sii dheer, khubarada Yaroslavl ee arintaan ayaa ahaa bilaw waxayna ka qeyb qaateen hormarinta sharciga federaalka ee u dhigma. Dugsiga tacliinta sare ee beeraha waxaa lagu magacaabaa darawalka geedi socodka horumarinta beeraha dabiiciga ah ee gobolka qeybta waaxda.
Sanadkii 2018, xitaa waxay xubin ka noqotay Ururka Ururka Beeraha Organic. Barnaamijyadeeda tababarka ee dhammaan heerarka tababarka waxaa ku jira anshax marinta soosaarka, ka shaqeynta iyo shahaadada wax soo saarka beeraha dabiiciga ah. Intaa waxaa sii dheer, jaamacaddu waxay aasaasay isweydaarsiga macluumaadka ee khubarada Jarmalka ee arimahan oo qayb ka ah mashruuc iskaashi ah oo Wasaaradda Federaalka ee Cuntada iyo Beeraha ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka “Agrarian-German Agrarian iyo Wadahadalka siyaasadeed”.
Anshax marinta beeraha dabiiciga ah ayaa horeyba loogu soo bandhigay dhamaan koorsooyinka tababarka ee Machadka Beeraha Yaroslavl
Xaruntu waxay xallin doontaa dhibaatooyinka tababarka, la-tashiga iyo bixinta caawinta abaabul iyo hanaan ee soo-saareyaasha beeraha ee qaybaha ku-xusan ee Xiriirka Ruushka, kaas oo ku ballaarin doona aqoontooda ku saabsan teknolojiyada soo-saarka dabiiciga ah, ayaa lagu yiri waaxda gobolka ee cilmiga agro-warshad.
Sida uu sheegayo dib-u-habaynta Xarunta tacliinta Beeraha ee Yaroslavl Svetlana Gusar, furitaanka xarunta kartida waxaa loo qorsheeyay 2021. Hadda qalabkii waa la iibsanayaa dhismayaashii loo qoondeeyayna waa la hagaajinayaa.
- Waxaan haysannaa dhisme weyn, dhisme wanaagsan leh iyo dhisme sedex dabaq ah oo ku yaal tuulada Mikhailovsky ee gobolka Yaroslavl, waxaana saldhig u ah inaan diyaarinno goobo tababar iyo banaanbax. Tuulada waxaa sidoo kale ku yaal aagagga lagu beeray: Mikhailovsky laftiisa - saddex hektar oo ku xigta - 60 kale. Hadafkeenna ugu weyni waa in aan baranno kaliya beeraha dabiiciga ah, laakiin geedi socodka wax soo saarka dabiiciga ah, oo ay kujirto howsha, kahor inta aan la soo saarin wax soo saarka macaamiisha ugu dambeysa. Taasi waa, ma aha oo kaliya inaan muujino: halkan waxaan ku beeranay sarreen dabiici ah ama hadhuudh, laakiin inaan ku quudinay sac, helnay caano dabiici ah, warshadaynay oo tusaale ahaan farmaajo sameeyay. Isticmaal mar labaad oo kaliya bey'ad saaxiibtinimo leh oo leh tayo horumarsan. Taasi waa, waxaan dooneynaa inaan tusno wareegga xirmo ee soosaarka dabiiciga ah.
Warshad farmaajo iyo xarun wax lagu dubto ayaa horay looga furay Mikhailovsky - iyadoo ah natiijada ugu horreysa ee wadahadalada ku saabsan mowduuca "dabiiciga ah" ee Guddoomiyaha Gobolka Yaroslavl Dmitry Mironov oo uu la socdo Wasiirka Beeraha ee Xiriirka Ruushka Dmitry Patrushev.
Sida uu sheegayo dhaqtarka YSAA, jaamacadda, marka lagu daro aaladda aasaasiga ah ee wanaagsan, oo "kaliya u baahan in la casriyeeyo oo la horumariyo," iyo sidoo kale horumarin hab-dhis ah oo khatar ah, ayaa leh waxa ugu muhiimsan ee u oggolaaday inuu ku qaado dariiqaan - takhasuslayaasha.
- Tilmaamaha tacliinta ee beeraha dabiiciga ah ayaa durba lagu soo ban dhigay dhamaan koorsooyinka tababarka - shahaadada koowaad, jaamacadeed, waxbarashadii postgraduate, waxbarasho dheeri ah. Waxaan haysannaa koorsooyin "dabiici ah" laga bilaabo 16 illaa 700 oo saacadood taasoo kuxiran baahida ardayda, ayay tidhi Svetlana Gusar.
Maanta, sida laga soo xigtay dhaqtarka, jaamacadda ayaa u dhaqaaqeysa furitaanka xarun karti, oo noqon doonta unug dhismeedkeeda, oo leh soo dhoweyn iyo xuduudo. Iyo durba marxaladan, Akadeemiyadu kaliya ma dhigto ardaydeeda mabaadii'da beeraha dabiiciga ah, laakiin waxay sidoo kale ku hawlan tahay sii wadista waxbarashada ee takhasuslayaasha ka socda gobollada badan ee Russia.
Waaxda gobolka ee warshadaha agro-warshadaha iyo suuqa macaamiisha ayaa sheegay in mustaqbalka dhow la qorsheynayo in la saxiixo heshiis ku saabsan iskaashiga u dhexeeya Wasaaradda Beeraha ee Xiriirka Ruushka, dowladda ee gobolka Yaroslavl iyo Ururka Qaranka ee Soo-saareyaasha iyo Macaamiisha Alaabada dabiiciga ah, iyo sidoo kale barnaamij tallaabo wadajir ah oo loogu talagalay horumarinta beeraha dabiiciga ah ee Xiriirka Ruushka.
Gobolka Yaroslavl waxaa ka jira lix shirkadood oo soo saaray waxsoosaarka beeraha. Goobaha ku yaal gobolka Uglich, si waafaqsan shuruudaha GOST 33980-2016 “Waxsoosaarka dabiiciga ah. Xeerarka soosaarka, samaynta, sumadaynta iyo iibinta 'sannadka 2019, ayaa la soo saaray 273 tan oo hilibka hilibka dabiiciga ah iyo 776,5 tan oo ah waxyaabaha caanaha laga sameeyay.
Alaabooyinka dabiiciga ah ee soosaarayaasha Yaroslavl waxaa la geeyaa in ka badan 500 oo dukaamo tafaariiqeed oo ku yaal gobollada Moscow, Yaroslavl iyo Moscow.
Qoraalka: Elina Trukhanova (Yaroslavl)
Source: Wargeyska Ruushka
Tags: Wasaaradda Beeraha ee Xiriirka Ruushkasoosaarka dabiiciga ahGobolka Yaroslavl